Manazava ny Fahaiza-manao Izay Ilainao ny Mametaveta Web
Tsy ho vitanao mihitsy ny hanangona angon-drakitra hikaroka fotsiny ao amin'ny Google. Indraindray dia tsy maintsy mampiasa mpiserasera amin'ny tranonkala maromaro sy ny fanangonana rakitra izahay mba hahavitana ny tetikasanay, ary indraindray izahay dia mila mampivelatra fahaiza-manao fototra. Marina fa afaka manampy anao hahita ny zavatra tadiavinao ny milina fikarohana, saingy mila mampivelatra ireto fahaiza-manao manaraka ireto ianao mba hahombiazana.
1. Ny fahafahana mamaky ny rakitra robots.txt
Tokony ho afaka mamaky sy manitsy ny rakitra robots.txt ianao. Ity rakitra ity dia ampiasaina mba hamerana ny mpitsikilo tsy hikapoka matetika ny tranokalanao. Amin'izany fotoana izany dia manampy anao hihazona ny kalitaon'ny rakitsarinao sy manatsara ny haavon'ny tranonkalanao ho an'ny mpitsidika olona. Izany no antony tokony hianaranao ny fomba hanitsiana ny rakitra robots.txt. Rehefa nanitsy io laha-tahiry io ianao, dia ho afaka hiala amin'ny bota ratsy izay tsy mifanaraka amin'ny fitsipika sy ny fitsipika momba ny fikarohana. Ankoatra izany, azonao atao ny mifantoka amin'ny tranokala isan-karazany amin'ny fotoana iray ary afaka manasitrana na manala ny angon-kevitra tiany.
2..Fametrahana ny fotodrafitrasa momba ny angona
Zava-dehibe ny mametraka ny fotodrafitrasa momba ny angon-drakitra raha hamaha ny angon-kalitao avy amin'ny tranonkala manontolo. Ohatra, mila mianatra SQL, PHP, ary fiteny hafa mitovy amin'izany ianao rehefa manampy ny fitazonana ny fotodrafitrasa amin'ny rakitrao amin'ny fomba tsara kokoa. Ny famelana ny fidirana SQL sy ny fametrahana ny fotodrafitrasa momba ny angona dia hahafahanao ho lasa mpandalina tena eo am-panaovana azy, ka hahazoanao marina kokoa sy voatahiry tsara ao anatin'ny minitra vitsy.
4. Ny fahafahana manoratra sy manamboatra ny bots
Tokony ho azonao atao ny manavaka ny botsabe sy ny bota ratsy. Ny boka tsara dia manampy amin'ny fikarohana ny tranonkalanao amin'ny valin'ny fikarohana, manome anao ny angona azo antoka sy avo lenta. Etsy andaniny kosa, ireo boka ratsy dia manimba ny tranokalanao ary tsy hamela anao na oviana na oviana ny angon-drakitra tsara. Tsy mila manavaka ny boka tsara sy ny boka ratsy ianao fa tsy maintsy manoratra sy manamboatra bots. Tokony hotadidinao fa ny boka no dingana manaraka amin'ny fivoaran'ny ordinatera sy ny fifandraisana amin'ny olombelona. Midika izany fa ny hahafantaranao bebe kokoa momba ny bots ary manoratra azy ireo matetika, ny ambony dia ho ny fahafahanao hanala ny angon-kalitao sy hanararaotra ny raharahanao Source .